အကောင်းဆုံး တရုတ် HZS50 စံ ကွန်ကရစ် သုတ်ဆေး စက်ရုံ ထုတ်လုပ်သူ နှင့် စက်ရုံ |Macpex
HZS50 ကွန်ကရစ်ရောစပ်စက်ရုံသည် တောင်တက်ပုံးအစာကျွေးသည့်မုဒ်ကို လက်ခံကျင့်သုံးသည့် 60 ရောစပ်စက်ရုံ၏ ရိုးရှင်းသောဖွဲ့စည်းပုံပုံစံဖြစ်ပြီး၊ semi-automatic ကွန်ကရစ်ရောစပ်စက်ရုံ၏ဖွဲ့စည်းပုံပုံစံသည် အစာကျွေးခြင်း၊ သုတ်ခြင်း၊ ရောစပ်ခြင်း၊ လျှပ်စစ်ထိန်းချုပ်ခြင်းနှင့် တင်းကျပ်သောဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ အစိတ်အပိုင်းများပါဝင်သည်။ရောစပ်စက်ရုံ 60 နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက HZS50 ကွန်ကရစ်ရောစပ်စက်ရုံသည် အရင်းအနှီးနည်းပြီး မြေဧရိယာနည်းပါးကာ စက်ပစ္စည်းကိရိယာများ တပ်ဆင်မှုနည်းပါးပြီး သီအိုရီအရ တစ်နာရီလျှင် 50 ကုဗမီတာ ထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်းရှိသည်။၎င်းသည် လမ်းအင်ဂျင်နီယာ၊ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းနှင့် အစိတ်အပိုင်းကုမ္ပဏီအတွက် စံပြဘူတာရုံတည်ဆောက်ရေးကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။
1. ၎င်းသည် တပ်ဆင်ခြင်းနှင့် နေရာရွှေ့ပြောင်းခြင်းအတွက် အလွန်အဆင်ပြေသည့် ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် modular ယူနစ်ကို လက်ခံပါသည်။
2. JS1000 နှစ်ထပ်အလျားလိုက် ရိုးတံ အတင်းအကျပ် ကွန်ကရစ်ရောနှောခြင်းကို လက်ခံဆောင်ရွက်ပေးပြီး အစုလိုက် ရုတ်သိမ်းခြင်းအတွက် ကောင်းသောရောစပ်မှု အရည်အသွေးနှင့် မြင့်မားသော ထိရောက်မှုတို့နှင့်အတူ အသုံးပြုသည်။
3. Pld1600 ကွန်ကရစ်သုတ်စက်ကို တိကျသောတိုင်းတာမှုနှင့် မြင့်မားသောထုတ်လုပ်မှုထိရောက်မှုတို့ဖြင့် အစုလိုက်အသုတ်အတွက် အသုံးပြုပါသည်။
4. အမှုန့်ကို သုတ်လိုက်တိကျမှုမြင့်မားသော အီလက်ထရွန်းနစ်စကေးဖြင့် တိုင်းတာသည်။
5. ရေကို အီလက်ထရွန်းနစ်စကေးဖြင့် တိုင်းတာသည်။
HZS50 ကွန်ကရစ်ရောစပ်စက်ရုံတွင် JS1000 အတင်းရောစပ်စက်၊ pld1600 သုတ်စက် (2 bins /3bins /4bins များကိုရွေးချယ်နိုင်သည်) နှင့် lsy273 screw conveyor များတပ်ဆင်ထားပါသည်။
HZS50 ကွန်ကရစ်ရောစပ်ကိရိယာကိုတည်ဆောက်ပြီး Hongbin ကိုရွေးချယ်ခြင်း၏အားသာချက်များကား အဘယ်နည်း။
ကုမ္ပဏီမှထုတ်လုပ်သော 50 m3 ကွန်ကရစ်ရောစပ်စက်ရုံ၏ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုန်ကျစရိတ်မှာ အတော်လေးနည်းသောကြောင့် အရင်းအနှီးပြန်လည်ရယူခြင်းသည် မြန်ဆန်ပါသည်။၎င်းသည် ဒေသမတည်ငြိမ်သော ရောစပ်ယူနစ်များအတွက် အလွန်သင့်လျော်သည်။၎င်းသည် အရင်းအနှီးနည်းပြီး ဆိုဒ်နည်းသောနေရာယူကာ စက်ကိရိယာများကို အသုံးပြုမှုနည်းပါးသည်။၎င်းသည် တံတားတည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများ၊ အစိတ်အပိုင်းကုမ္ပဏီများနှင့် အကြီးစားနှင့် အလတ်စား ရောစပ်စက်ရုံများအတွက် စံပြပုံစံတစ်ခုဖြစ်သည်။
● အမည်ခံအထွက်- 50 m³/h
● ရောနှောအားသွင်းခြင်း- 1 m³
● Batching စက် PLD: 1600-III
● စုစည်းသိုလှောင်မှုပုံးများ အားသွင်းခြင်း-7m³
● စုစည်းသိုလှောင်မှုပုံးများ ပမာဏ-3pc
● စုစုပေါင်းအလေးချိန်- 3000 ကီလိုဂရမ်
● Flyash အလေးချိန်: /
● ရေအလေးချိန်: 250 ကီလိုဂရမ်
● Additive အလေးချိန်ပမာဏ- 40 ကီလိုဂရမ်
● Mixer ပါဝါ: 37 kW
● Belt conveyor ပါဝါ: 11 kW
● စုစုပေါင်းပါဝါ: 80 kW
● Mixer discharge အမြင့်- 3.8 m
● စုစုပေါင်းအလေးချိန်: 32 t
● ကောက်ကြောင်းအတိုင်းအတာ (L x W x H) : 15.4 mx 12.3 mx 19.2 m
ယခင်- HZS120 inclined belt conveyor ကွန်ကရစ်သုတ်စက်ရုံ